Showing 1-10 of 1,087 items.
सिद्धि नेवाः परिषद्द्वारा निःशुल्क आँखा शिविरको आयोजना
धरान । सिद्धि नेवाः परिषद् धरानले नि: शुल्क आँखा शिविरको आयोजना गरेको छ । मंगलवार परिषद्को भवनमा सम्पन्न शिविरमा १ सय १७ जनाले आँखा जाँच गरेका थिए । नेपाल नेत्र ज्योति संघ बिराटनगर आँखा अस्पताल रानीका चिकित्सक टोलिले आँखा जाँच गरेका थिए । शिवरमा शल्यक्रियाका लागि छनौट भएका विरामीहरुका लागि नि: शुल्क शल्यक्रिया गरिने व्यवस्था गरिएको परिषद्क अध्यक्ष गोकुल प्रसाद श्रेष्ठले बताए । विरामीका लागि सहुलियत दरमा चश्मा तथा औषधि समेत उपलब्ध गरिएको थियो । आँखा जाँच गरेका विरामीहरुकालागि आवश्यक परामर्श गरिनुका साथै थप उपचार गर्न नसक्ने भए संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्ने समेत योजना रहेको शिविर संयोजक मोहन श्रे
बीपीमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम स्थगित: सर्वसाधारण भने मारमा
धरान । केही समय अगाडि सरकारले स्वास्थ्य विमामार्फतको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि सेवा सुचारु गरेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पुनः सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने जनाएको छ । प्रतिष्ठानाले सोमबार एक सूचाना जारी गर्दै विमा कार्यक्रमको सरकारसँग ३४ करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र बाँकी रहेको रकम नदिएकै कारण वीपी सञ्चालनमा कठिनाई भएको भन्दै वीमा कार्यक्रमलाई स्थगन गरिएको जनाएको छ । विमा बोर्डबाट बीपीले दाबी गरे अनुरुपको रकम नआएपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक लगायत प्रतिष्ठानमा
धरान । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नै ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । असार २ गतेबाट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको ब्लड बैंकबाट वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले आफ्नो ब्लड बैंक पुर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानको प्याथोलोजी विभाग अन्तर्गत सञ्चालित ब्लड बैंक असार २ गतेदेखि पुर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । सञ्चालन भएको ब्लड बैंकबाट रक्त अल्पता भएका र डायलाइसिस गर्नुपर्ने विरामीहरुको लागि पिसिभी सेवा दिइने प्रतिष्ठानका सह प्रवक्ता डा. चुरामणि पोख्रेलले जानकारी दिए । उनले भने–‘प्रतिष्ठानले आफ्नै ब्लड बैक २ गतेबाट सञ्चालनमा ल
धरान । वडाबासीका स्वास्थ्यका लागि धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ ले निःशुल्क आखा शिविरको आयोजना गरेको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघको प्राविधिक सहयोगमा इटहरी आखा अस्पतालको सहयोगमा निशुल्क आखा शिविर एवम् चश्चा वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । वडामा रहेका दीर्घरोगी तथा अन्य आखाका समस्या भएकालाई लक्षित गरी धरान १४ ले निःशुल्क आखा शिविरको आयोजना गरेको जनाइएको छ । विगतदेखि नै विभिन्न संघ संस्थासंग समन्वय गरेर विभिन्न प्रकारका निशुल्कस्वास्थ्य शिविको आयोजना गर्दै आएको वडाले निर्वाचित भएर आएपछि भने आखाका समस्या भएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी आखाको शिविरको आयोजना गरिएको धरान १४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रस
मृगौला पीतिलाई राहत : एक हजारमै डाइलासिस
धरान । मिर्गौला पीडित विरामीहरूले चर्को शुल्क तिर्दा पनि घण्टौ लाइनमा बसेर हेमोडायलाइसिस गरेको घटना बाहिर आइरहँदा विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पतालले मिर्गौला समस्या भएका विरामीको लागि सस्तोमा डाइलासिस गर्ने भएको छ । अस्पतालमा मिर्गौला पीडित विरामीहरूको सहजताको लागि एक हजारमा डायलाइसिस सेवा सुरू गरेको छ । अब मिर्गौला पीडित विरामीहरूले डायलाइसिस गर्नुपरे न्यूरो अस्पतालले गत वैशाखदेखि विराटनगरको महेन्द्रचौकस्थित हेमाडायलासिस सञ्चालनमा ल्याएको छ । सर्वसुलभ ढंगमा गुणस्तरीय डाइलासिस गर्न पाउने भएपछि विरामीले राहत मिलेको बताएका छन् । अस्पतालका डाइरेक्टर ई. रन्जितराज बस्नेतले विरामीहरूको सहजताको लागि
धरानमा असार एक देखि बुष्टर डोज लगाइने
धरान । धरानमा असार १ गतदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोजको खोप लगाइने भएको छ । धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाल दिएको जानकारी अनुसार १२ बर्ष उमेर समुहदेखि माथिका उमेरका दोस्रो खोप लगाएको तीन महिना पूरा भएकाले मात्रै बुस्टर डोज खोप लगाइने भएको हो । असार ५ गनेसम्म सञ्चालन हुने खोप अभियान धरानभरि विभिन्न स्थान गरी १४ स्थानबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिए । तोकिएको खोप केन्द्रमा बिहान १० बजे देखि साझ ४ बजे सम्म खोप लगाउन सकिने उनले बताए । खोप लगाउन जानेले अनिवार्य दोस्रो पल्ट लगाएको खोप कार्ड भएमात्र बुस्टर खोप लगाउन पाइने बताएको छ । अहिले सम्म
‘उपचारमा फिजियोथेरापी अत्यन्तै लाभदायी’
धरान । धरान १०, पुतली लाईनमा सञ्चालन भएको लाइफ केयर फिजियोथेरापी सेन्टरको शनिवार धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १०का वडाध्यक्ष विवेक राईले उद्घाटन गरे । उद्घाटनपश्चात बोल्दै वडाध्यक्ष राईले फिजियो थेरापी उपचारका लागि अत्यन्त लाभदायी हुने बताए । उनले भने–‘उपचारको पद्धतिमध्ये फिजियोथेरापी अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ, यस थेरापी सेन्टरले धेरै भन्दा धेरै विरामी निको पारोस् मेरो शुभकामना ।’ फिजियोथेरापीको सञ्चालन धरानका युवा प्रवीर श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनले धरान र धरान आसपासका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी लाइफ केयर फिजियोथेरापी सञ्चालन गरेको बताए । उनले भने– ‘धरान तथा धरान आपसप